IMicrosoft ifuna ukuba i-3,5 mm jack ibuyele kwii-smartphones | Iindaba zeGajethi
IMicrosoft ifuna ukuba i-3,5mm jack ibuyele kwii-smartphones
Ngelixa kuyinyani ukuba iApple yayingeyiyo inkampani yokuqala eyakhetha ukuphelisa uqhagamshelo lwentloko yejack kwii-smartphones zayo, yayiyeyona nkampani inkulu yokuqala eyakhetha ukuyenza inyamalale. Kancinci kancinci nangakumbi abavelisi bakhethe ukwenza ngaphandle kwale jack, i-jack leyo kuthintelwe ii-smartphones ekubeni zingabi nandawo Ukongeza kokuhlala kwindawo ebaluleke kakhulu ngaphakathi kwesixhobo.
Itekhnoloji esiyifumana ngaphakathi kwii-smartphones namhlanje isinika inani elikhulu lezinto ezisebenzisa nawuphi na umngxunya kwisixhobo kunye nejack kule minyaka idlulileyo ibe yingxaki yendawo. UMicrosoft ufake ipatent ngokusibonisa ukuba ngaphandle kwendlela abavelisi ngayo, kunokwenzeka ukuba uqhubeke kubandakanya nejack.
Ilungelo elilodwa lomenzi wechiza likaMicrosoft lisibonisa i-jack eyandisa ubungakanani bayo kubulewe inwebu efihliweyo, inwebu eyandisa ubungakanani bayo xa sifaka iplagi. Umbono wale membrane ukuba yibeke kwelinye lamacala esiphelo okanye ngasemva okanye ngaphambili, Ukudala uhlobo lwe-hump njengoko iikhamera ngoku zibonelela ngenani elikhulu leefowuni.
Okucacileyo kukuba ukuba uMicrosoft ebesungule le mbono kwangethuba, kunokwenzeka ukuba omnye umenzi ngewayamkele, okanye hayi. Kodwa njengetekhnoloji kunye ulwazi apho ishishini libeke khona abasebenzisi, ikamva zii-headphone ze-bluetooth ezingenazingcingo okanye, ukusilela oko, ii-headphone ezinentambo, ukuba sifuna umgangatho ophezulu, ngoqhagamshelo lwe-USB-C okanye umbane ukuba sithetha ngezixhobo ze-Apple.
Okwangoku kwintengiso singabafumene abavelisi abohlukeneyo abasinika izisombululo kuzo zombini iindlela, nangona abavelisi abakhethe ukuphelisa uqhagamshelo lwejack, qhubeka unikezela iadaptha ukuqhubeka nokusebenzisa ii-headphone zemveli ngonxibelelwano lwejack.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » IMicrosoft ifuna ukuba i-3,5mm jack ibuyele kwii-smartphones
Isamsung ihlasela iApple kwividiyo yayo yamva nje: 'Samsung Galaxy: Iyakhula'